खोटाङमा कांग्रेस बडारियो किन ? यी हुन् कारण ! - Hamrokhotang
Home » Photo Gallary » Serofero » खोटाङमा कांग्रेस बडारियो किन ? यी हुन् कारण !
खोटाङमा कांग्रेस बडारियो किन ? यी हुन् कारण !
काठमाडाैं २५ मंसिर
गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा १० स्थानीय तहमध्ये ४ स्थानीय तहमा विजयी नेपाली कांग्रेस १० मंसिरमा पहिलो चरणमा सम्पन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा भने जिल्लामै शून्य बनेको छ ।
मतपरिणाम अनुसार प्रतिनिधिसभातर्फ एमाले उम्मेदवार विशाल भट्टराई १३ हजार ७ सय ७ मतान्तरले विजयी भए । प्रदेश क मा एमालेकै राजन राई ५ हजार ५ सय २२ र ख मा नेकपा माओवादी केन्द्रका रामकुमार राई पासाङ ६ हजार १ सय ३३ मतका साथ विजयी भए ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यमा बाम गठबन्धनको तर्फबाट प्रत्यक्ष उम्मेदवार नेकपा एमालेका विशाल भट्टराईले ३५ हजार ३ सय ७७ मत ल्याएर कांग्रेसका सरस्वती बजिमयलाई पराजित गरे । निकटतम प्रतिस्पर्धी बजिमयले २१ हजार ६ सय १२ मत मात्र पाइन् ।
यस्तै, प्रदेशसभा ९क० तर्फ वाम गठबन्धनका प्रत्यक्ष तर्फ साझा उम्मेदवार एमालेका राजन राईले १८ हजार ९ सय ३३ मत ल्याउँदा प्रतिस्पर्धी सुवासकुमार पोखरेलले १३ हजार ४ सय ११ मत प्राप्त गरे ।
प्रदेश ९ख० मा खसेको कूल ३४ हजार ७ सय १५ मतमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट बिजयी रामकुमार राई पासाङले १८ हजार ३ सय ७२ मत ल्याए । बिष्णुले भने १२ हजार २ सय ३९ मत पाए ।
यो नतिजा केलाउने हो भने खोटाङमा कांग्रेसले वर्चस्व गुमाउन पुगेको छ । किन गुमायो भन्ने कारण भने अनेक रहन सक्छन्, त्यसमध्ये केही मुख्यलाई केलाऔं ।
चेत खुलाउन नसक्नु
०६४ सालमा कांग्रेसले जिल्लाका दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फ हार चाख्यो । नेकपा माओवादी केन्द्रले दुवै सिट जित्दा एमाले समेत पराजितको शोकमा डुब्यो । तर, त्यसपछि एमाले शोकमा डुबेको पाइएन । सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकामा उत्रियो । संगठन बनाउन लाग्यो, विकास निर्माणको अगुवाईमा लाग्यो, कतिपय ठाउँमा त पार्टी भन्दा माथि उठ्यो । पार्टी संगठनलाई मजबुत बनायो । त्यसको नतिजा ७० को निर्वाचनमा दुवै क्षेत्र जितेर देखायो । हारपछि कांग्रेस भने सुतेर बस्यो भन्दा फरक पर्दैन । समानुपातिकतर्फ सांसद पाएको कांग्रेसका सांसद (तत्कालिन संविधानसभा सदस्य) को भूमिका निष्क्रिय रह्यो, यतिसम्म कि कांग्रेसको सांसद भनेर थोरैले मात्र चिन्ने स्थिति रह्यो । त्यो श्रृंखला अहिलेको निर्वाचनसम्म नै जारी रहनु कांग्रेस पराजयको सिकार बन्न पुग्यो । कांग्रेसकाे यो हारको तेस्रो ह्याट्रिक समेत बन्यो । ६४, ७० मा समेत कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ जित्न सकेको थिएन ।
गुमनाम नेतृत्व, अगुवाईमा हरायो
कांग्रेसको हारको मतान्तर फराकिलो हुनुमा गुमनाम नेतृत्व रहनु पनि देखिन्छ । कांग्रेसले जनताको दुःख सुखमा सक्रियता कम रह्यो, विकास निर्माणको अगुवाई त झनै देखिएन । वाम गठबन्धनको सक्रियता हेर्ने हो भने कांग्रेसको सक्रियता फिक्का देखिन्छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा नेकपा माओवादी केन्द्रले दिक्तेलमा नै उतार्यो, जयराम पुल, मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माण लगायत विकास निर्माणका विषयमा बोल्न लगायो, प्रचण्डले पनि पहल कदमी राम्रै गरे । पुनः स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि प्रचण्डलाई पार्टीले जिल्ला झिकायो । संगठन विस्तार, जनतासँगको हातेमालेमा माओवादी अग्रसर नै देखियो ।
एमालेको भूमिका त झनै सक्रिय रह्यो । संगठन जहिल्यै चलाएमान बनायो । जयरामघाट पुल निर्माणका लागि दबाब दिन मात्र भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय र सडक विभागमा दर्जन पटक जति डेलिगेशन तथा आन्दोलनमा उत्रियो । यस्ता विकास निर्माणको काममा पहल गरिरह्यो । संगठन निर्माणमा जहिल्यै चासो राख्यो । तर, यता कांग्रेसले यस्ता काम गर्दै गरेन भन्न त मिल्दैन, तर देख्ने गरी गरेको देखिएन । जनताले पनि देखेनन् त्यसैले भोट हालेनन् ।
कांग्रेसी मात्र आफ्नो, अरुलाई बिरानो
खोटाङ कांग्रेस पार्टी पुरानै डर्रामा चल्यो । नेतृत्वको सोच बुझ्ने हो भने, हाम्रा शुभचिन्तक तथा पार्टी सदस्यले हामीले केही नगरी पनि हामीलाई नै भोट दिन्छन् भन्ने सोच कांग्रेस जनमा देखियो । पार्टी सदस्य, शुभचिन्तकका पिर मर्का बुझ्नेमा सोचेन । अझ खतरा कुरो त के रह्यो भने कांग्रेसले कांग्रेसीलाई आफ्नो मान्छे गन्ने अरुलाई नगन्ने प्रवृत्ति थेरथोर देखियो । यसले पनि तटस्थ मतदाता बिच्किए र उनीहरु भोट हाल्न तर्किए ।
गठबन्धन बलियो, नारा गतिलो
स्वभाविक रुपमा पहिलो र तेस्रो शक्ति मिल्दा दोस्रो शक्ति कमजोर हुनु नौलो रहेन । खोटाङमा पनि त्यहीँ देखियो । एमाले र माओवादी मिल्दा दोस्रो शक्ति कांग्रेस बडारिन पुग्यो । अझ वाम गठबन्धनको स्थिर सरकार, विकास निर्माण जस्ता नाराले मतदातालाई तान्यो ।
यसर्थ, कांग्रेस हारको नजिक त पुगेकै थियो, तर कांग्रेस नेतृत्वको कम सक्रियता, पार्टी भन्दा माथि उठ्न नसक्ने कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्ताको प्रवृत्ति, अघिल्ला निर्वाचनहरुमा निर्वाचित समानुपातिक सांसद गुमनाम रहनु, सांसद तथा नेतृत्वले विकास निर्माणमा अगुवाई गर्न कहिल्यै अघि सर्न नसक्नु, उम्मेदवार छनोट आदी कारणले कांग्रेसलाई लज्जास्पद हारसम्म पुर्यायो ।
के अब कांग्रेस सुध्रिएला त ? यो प्रश्नको उत्तर पाउन भने सयमलाई कुर्नै पर्ने देखिन्छ । प्रदेश क मा पराजित सुभाषकुमार पोखरेलले भने अब कांग्रेस जनतामा पुग्ने संकेत गरेका छन् ।
फेसबुकमा उनले जितेकाहरु सरकारमा जाने र भत्तामा रमाउने र आफूहरु चाँही जनतामा जाने, जनताको पिर मर्का बुझ्ने भन्दै चेतावनी शैलीमै लेखेका छन्, 'कांग्रेस हारेको छैन, प्रतिस्पर्धामा पछि परेको छ । पहिलो हुनेले सत्ता चलाउछ पछि पर्नेले जनता चलाउछ । पहिलो हुने जित्नेले सत्ता र भत्ता पाउछ,पछि पर्नेले फेरि जनतामा गएर ममता र आस्था जगाउछ ।'